Gentoo Linux Nhanho-nhanho Kuisa Nongedzo | Kubva kuLinux
Gentoo Linux Nhanho-nhanho Kuisa Nongedzo
Gentoo Linux Kugovera kweLinux kwakanangidzirwa ku vanoshandisa uine chokwadi chiitiko asi inozivikanwa neyakagadziriswa uye velocityMuchikamu chino tinogovana nhanho-nhanho tutori yekumisikidza kwayo uye kugadzirisa kwadzo.
Uyu mupiro kubva kuna Tete Plaza, nekudaro uchiva mumwe wevakakunda mumakwikwi edu evhiki: «Goverana zvaunoziva nezve Linux«. Makorokoto Tete!
Chekutanga pane zvese ini ndoda kutaura kuti zvese izvo zvinodiwa nemunhu zviri paGentoo Wiki, kana paArch Wiki, mibvunzo inoenderana nekuisirwa iri mubhuku raGentoo. Ini ndinoita izvi dzidziso nekuti vanhu vakati wandei vakandibvunza nezvazvo, uye nekuti ndiri kuzowedzera granite yangu yekugadzirisa kana ndichiisa Gentoo.
Ziva kuti vanhu vanoverenga vanokosheswa mune ino distro. Ehe, iyo distro uko mazhinji ematambudziko anogona kugadziriswa nekuverenga iyo wiki uye nekutsvagisa zvishoma (ndokuti, kana iwe ukabvunza chimwe chinhu uye ivo vachipindura "tarisa pawiki", zvinoreva kuti semushandisi weGentoo uri kusaita zvinhu nemazvo xD). Izvi hazvireve kuti "yakapusa" mibvunzo haina kupindurwa, asi huwandu hukuru hwemapepa hunoratidza kuti munhu averenge kugadzirisa matambudziko avo.
Iye zvino ndichaenda kunotaura, mukurova kukuru, chii chinonzi Gentoo, chii chinoshamisira nezvazvo, uye chii chinoita kuti chisiyane nemamwe maLinux distros. Isu tichafunga kuti Gentoo kodhi yekodhi yakavakirwa distro Izvi zvinorevei? Izvo zvakasiyana neyakajairika distros (yakamisikidzwa) senge Debian, Ubuntu, Arch, Manjaro, Fedora, SUSE, uye yakareba nezvimwe. Paunenge uchiisa package, haina kurodha pasi inoitisa (binary, .deb, .rpm, .pkg.tar.xz, nezvimwewo) uye nekuimisa, asi asi inotora kodhi yekodhi yayo, inoiunganidza zvinoenderana neprosesa yedu uye Mitemo yatinayo. yakatsanangurwa pamapakeji, uye neizvi inogadzira iyo inogoneka, iyo inozoisa.
Chii chinoita kuti Gentoo ive yakasarudzika distro haisi iyo chete yekuti inonyora iwo mapakeji, asi zvakare iyo iyo munhu anosarudza rutsigiro rwezvinhu zvinoonekwa pasuru yega yega Iwo wakananga mhedzisiro yekugadzirisa uye kunyora iyo
mapakeji, ndiyo inomhanya. Sei? Ngatizvifananidzei nemuenzaniso.
Kuve X preompiled distro (yandakambotaura pamusoro), kuitira kuti X distro iiswe pamhando dzakasiyana dzemuchina, zvinodikanwa kuti mapakeji ayo aunganidzwe pamwe neiseti yemirairidzo yemuchina wekare. Nenzira iyi, kana tichida kuti vamhanye kubva kuPentium II zvichienda mberi, tichaunganidza mapakeji avo ese neiyo Pentium II yekurayira yakatarwa.
Izvi zvinounza mhedzisiro ipi? Kuti mune maprosesa matsva, fungidzira i7, mapakeji aisazotora mukana wese unopihwa neyekupedzisira, nekuti kana akaunganidzwa neyakaiswa mirau yakapihwa neI7, haigone kuurayiwa muma processor pamberi peizvi imwe, nekuti yekupedzisira inoshaya aya mirairo mitsva.
Gentoo, nekukodha kodhi yekodhi uye nekuiumbirira processor yako, ichatora mukana wayo uzere, nekuti kana iwe ukaiisa pane i7, inoshandisa kuraira kwakatemwa kwekupedzisira, uye kana iwe ukaiisa pane iyo Pentium II , inoshandisa inoenderana neyekupedzisira.
Kune rimwe divi, iwe unogona zvakare kugadzirisa iyo mhando yerutsigiro iwe yaunoda kuti mapakeji ave nawo. Ini ndinoshandisa KDE neQt, saka ini handina basa kana mapakeji ane GNOME uye GTK rutsigiro, saka ndinokuudza kuti uzvigadzire pasina rutsigiro rwavo. Nenzira iyi, kana uchienzanisa iwo iwo mapakeji paGentoo uye pane distro X, iyo Gentoo package yakareruka. Uye sezvo mu distro X mapakeji akajairwa, ivo vanozove nerutsigiro rwezvose.
Iye zvino, ndave ndaita sumo, ndinokusiya mafaera ekugadzirisa mafaira angu anofambidzana negwaro rePDF randakaita pamaitiro ekuisa Gentoo kubva kuLinux Live CD (Ubuntu, Fedora, SUSE, Backtrack, Slax, kana chero chii chinoitika kwavari) kana kubva pachikamu chavaine Linux distro yakaiswa.
Dhawunirodha Gentoo yekuisa dzidziso Dhawunirodha marongero angu
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Gentoo Linux Nhanho-nhanho Kuisa Nongedzo
Juan Manuel Lopez muchengeti wemufananidzo akadaro
Pane chero munhu anoziva kuisa nvidia madhiraivha ane optimus tekinoroji pane asus n61jv kabhuku? Ini handisi kukwanisa kuti vhidhiyo kadhi rishande… ingoshandisa Intel kadhi uye rinodya iro bhatiri….
Pindura Juan Manuel Lopez
wow ndanga ndichitsvaga chakadai, ndiri mushandisi wewindows asi iyi distro yakabata pfungwa dzangu, ndinovimba ndinogona kuibata zvakanaka
Kugona!!! Kuisa Gentoo muchikamu chekushandisa CHROOT ini ndakakanda kukanganisa nekuda kwekuvakwa (mumaonero angu) yeiyo live CD yandaishandisa uye iyo yandakaburitsa hahaha.
Saka kutangazve kuisa zvakare, mushure mechinguva ndinokuudza kuti zvakafamba sei>.
Iri gwaro richiri razvino
Ndatenda zvikuru, ndiri kutevera iyo dzidziso, ndakaedza kakati wandei kuisa gentoo, asi ini ndaigara ndichiguma ndarega, tichaona kana ndikabudirira panguva ino.
Shamwari ini ndiri kuyedza kurodha pasi kubva kune yepamutemo peji (ndinofungidzira): https://www.gentoo.org/downloads/
Mubvunzo ndewekuti ini ndinotora pasi ndeupi uye ndeupi musiyano pakati peimwe neumwe, unouya iwo mashoma ekuisa CD, Hybrid ISO uye Stage 3 ... Ini ndiri mutsva kune izvi, ndingafarire kana iwe ukanditsanangura kana kundipa chinongedzo neruzivo.
Pindura kuna carl
LibreOffice 4.0 ichavandudza mukuonekwa uye mashandiro
Ubuntu inogona kunge iri Rolling Kuburitswa pakati peLTS shanduro